Daawo Sawirro: Maqaayad laga helo cashada dunida ugu qaalisan oo la furay (Qiimaha) – Saafi News Somali News & Entertainment Hindi Af Soomaali Musalsal
Daawo Sawirro: Maqaayad laga helo cashada dunida ugu qaalisan oo la furay (Qiimaha)
January 6, 2017	181 Views Maqaayad loogu magac daray Ce La Vi ayaa laga furay dalka Singapore, waxaana maqaayadaas iska leh shirkad Dheemanka sameysa oo laga leeyahay dalka Russia taasoo lagu magacaabo World of Diamonds. Waxaa Mayaaqadan ay fursad u siineysaa lamaanayaasha ugu nasiibka badan cashada ugu qaalisan adduunka oo ay hal habeen isla qaataan iyo waqti macaan.
Qiimaha lacagta ee la iibinayo cashadaas halka habeen waa labo milyan oo dollar, waana qiimo aad u sarreeya, waa xaqiiqo iney tahay cashada ugu qaalisan adduunka ee uu shaqsi hal habeen fadhiga uga kici karo, laakiin casho kaliya maaha waxaa jirta hadiyad kale qaali ah.
Shirkadda World of Diamonds ayaa waxay dhowaan soo bandhigtay faraanti dheeman ah oo loogu magac daray Jane Seymour.
Lamaanahan ayaa marka ay wada qaataan casho soconeysa Sideed saacadood waxaa gacanta laga saari doonaa faraantigaas dheemanka ah ee loogu magac daray Jane Seymour.
Dad badan ayaa la yaabay cashaqada qaaliga ah ee maqaayadan lagu iibiyo, iyagoo u qaatay sheeko dhalanteed ah hase ahaatee waxaa dunida ku nool dad bilyoneero ah oo qiimahaas lacageed uusan waxba la aheyn.
Previous: Jilaa Caan Ka Ahaa Aflaanta Hindiga oo geeriyooday (Akhri Magaciisa)
Next: Daawo Sawirro: Boqorad caan ka ah dunida oo sheegtay iney qasrigeeda kula nooshahay reer aaqiraad
Daawo Sawirada “Meydka Ilmo Saddex sano jir ah oo laga helay Magaalada Laascaanood iyo Muran ka dhashay meydka !!
Daawo Sawirada “Yaxaas Badeed looga qaxay Xeebta Yurub ugu Dalxiiska badan oo ugu dambeeyntii Cirbad lagu dilay !!
Haweeney Maxkamad loo saaray in Jaceylkeeda u sahashay in uu galo dalka Britain iyo saxaafadda oo aad u hadal haysa…
Daawo Muuqaal “Sixiroole ka towbad keenay Sixirkii uu samayn jiray, iyo wixii ugu yaabka badnaa ee uu arkay
DAAWO: Maki Xaaji Banaadir oo Wacdaro ka hordhigay Madaxda DFS: Aabe Farmaajo Lacag ayaan Rabnaa
DHAGAYSO: Noloshada Soomaalida & Muslimka Canada oo Maanta Halis ku jirta (SABABTA)